शब्द/तस्बिर : कुम्भराज राई
पहाडी गाउँघरमा दशैंको बेला देखिने रोटेपिङ हिजोआज लोप हुँदै गएको छ । कतैकतै मात्र रोटेपिङ देख्न पाइन्छ । त्यही पनि पहिले पहिले देखिने ठूलो आकारको रोटेपिङ भेटिन धौधौ छ । काठको अभाव, पिङ बनाउनका लागि खटिने युवा जनशक्तिको अभाव प्रमूख कारण हुन् ।
दसैं दशा नबनोस्
महान चाड बडादसैं घरआँगनमा आइसकेको छ । आ–आफ्नो गच्छे वा क्षमता अनुसार सबैले हर्षोल्लासपूर्वक मनाऔं । देखासेखी भन्दा आफ्नो आर्थिक हैसियत वा आम्दानी हेरेर मनाउनु उचित हो ।
दसैंमा लामो बिदा हुन्छ । कार्यालय, स्कुल, कलेज सबै बन्द हुन्छन् । कार्यालयहरू कम्तीमा चार दिन बन्द रहनेछन् । प्राय: शिक्षणसंस्थाले तिहारसम्मै बिदा दिन्छन् ।
यस्तो छ साइत
यसपालि विजयादशमीको मुख्य दिन अर्थात् टीका कात्तिक २ गते शुक्रबार परेको छ । देवीको प्रसाद लगाउन बिहान ९ बजेर ५१ मिनेटको साइत जुरेको छ ।
निधारभरि रातो टीका, जमरा, नयाँ कपडा, पिङ, मालश्री धून, लिपपोत अनि रंग्याएर नयाँजस्तै बनाइएको घर, शक्तिपीठहरूमा धार्मिक अनुष्ठान, अग्रजबाट टीका र आशीर्वाद, टाढा–टाढाका आफन्तसँग भेटघाट ! दसैं भन्नेबित्तिकै यी प्रसंग ताजा भएर आउँछन् ।वर्षभरि जति दु:ख गरे पनि दसैंका बेला गच्छेअनुसार मिठोमसिनो खाने नेपाली परम्परा मौलिक छ ।
दुईतिर ठूलो काठको थाम गाडिएको छ । त्यसकै माथि केप (बलो अड्काउने) पारिएको हुन्छ । त्यही केपमा बलो घुसाइन्छ । चारवटा काठकै बाँह (खट बनाउन राखिएका) हुन्छन् । त्यही बाँहमा खट (पिर्का) बनाएपछि बन्छ, चर्खे पिङ ।
दसैं हाम्रा लागि विशेष पर्व किन हो भने यसमा हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा र विश्वास लुकेको छ  । दसैंमा धार्मिक होस् अथवा दार्शनिक दुवै पक्षबाट शक्तिको पूजा गर्ने परम्परा छ  ।
सीमाको बजार पारिपट्टि
जीविका चलाउनेदेखि लिएर हुने खाने परिवार किनमेलका लागि भारतीय बजार पहिलो रोजाइ बन्दै आएको छ  । विवाहका मौसम होस् वा चाडपर्व सीमावर्ती नेपाली सहरका बासिन्दाको किनमेलको थलो हो भारतीय बजार  ।
आफ्नै गाउँ फर्की आएँ...
नेपालगन्ज नाकामा यतिबेला छुट्टै चहलपहल छ । एकाबिहानै भीडभाड लाग्छ । यात्रु लिन तँछाडमछाड छ । टाँगा, रिक्सा, अटो सबै भरिभराउ छन् । भीड व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई धौ–धौ छ ।
कैलाली लम्कीका मनिराज खनाल ६५ वर्षका भए । बाल्यकालदेखि नै कामको खोजीमा भारत जान थालेका उनको न त जीवनस्तर फेरियो न रोजगारीको गन्तव्य नै ।
जनकपुरस्थित सामुदायिक परिवार कल्याण संघमा कार्यरत नगराइन नगरपालिका–७ देवडिहाका रमलेशकुमार शर्मा मंगलबार अपराह्न अलि चिन्तित देखिन्थे । संघका केन्द्रीय पदाधिकारीको उपस्थितिमा महत्त्वपूर्ण बैठक चलिरहँदा पनि उनी भित्र–बाहिर गरिरहेका थिए ।
दसैं भन्नेबित्तिकै नयाँ नोटको प्रसंग आइहाल्छ । दसैं र तिहारमा टीकासँगै दक्षिणा दिइन्छ । दक्षिणा दिँदा नयाँ नोट दिने चलन छ ।
काढ्न पर्दैन ऋण
हुनेखानेले दसैंलाई खर्चिलो पर्व बनाएका कारण हुँदाखानेहरू ऋण काढेरै भए पनि खर्च गर्छन् । पर्वतमा केही परिवार यस्ता छन्, जो पर्व मान्न ऋण गर्दैनन् ।
दसैंकाे फुर्सदलाई गन्तव्य
दसैंको फुर्सदमा घुमफिर गर्न चाहनेका लागि प्रदेश १ मा थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्य छन्  । विश्वकै सबैभन्दा होचो कचनाकवलदेखि सूर्याेदय दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध श्रीअन्तु, ‘गुराँसको राजधानी’ मिल्के डाँडाजस्ता लेकाली क्षेत्रको फन्को लगाउन सकिन्छ  ।
दसैं भन्नेबित्तिकै राम्रो लगाउने, मिठो खाने प्रसंग आइहाल्छ  । यसैका कारण बजार थप चलायमान हुन्छ  ।
डा. अर्जुन बराल
नेपालीको आँगनमा बेग्लै उत्साह, उमंग र रोमाञ्चकता बोकेर दसैं भित्रिँदै छ  । यससँगै आर्थिक चाँजोपाँजोको चटारो पनि छ  ।
नेपाली संस्कृतिमा जमराको निकै ठूलो अर्थ छ  । हिन्दु ग्रन्थमा पहेंलो रङ शान्ति र सुन्दरताको प्रतीक मानिन्छ  ।
देवीको आराधना गरिने दसैंमा विभिन्न शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो लाग्छ  । कतिपय पीठहरुमा नवरात्रभरि मेला नै लाग्ने गरेको छ  ।
इलाम सदरमुकामका घनेन्द्र भक्तराजको यो ७७ औं दसैं हो  । १९९८ सालमा जन्मिएका भक्तराजलाई ७ वर्षको उमेरदेखिका दसैंको सम्झना छ  ।
अब आर्थिक विकास
सधैंजसो राजनीतिक विषयले मात्र प्राथमिकता पाएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिले अब आर्थिक विकासमा ध्यान दिन सुझाएका छन्  । कान्तिपुरले विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलका सहभागीले समृद्धिका लागि आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए  ।
मधेसी समुदायलाई विजयादशमीको एक महिनाअघिदेखि नै दसैं लाग्छ । गणेश चतुर्थीकै दिन देवीको मूर्ति बनाउन आरम्भ गरिन्छ ।
तराईमा आफ्नै शैलीको दसैं
समुदायपिच्छे दसैंका फरकफरक रङ छन्  । तराईका आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको पनि साझा पर्व हो यो  ।
वडा दसैंको पहिलो दिन आज बुधबार घरघरमा वैदिक विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरेर घटस्थापना गरिएको छ । गोरखाको ऐतिहासीक गोरखा दरबारमा विधिपूर्वक पुजा गरेर ७:१५ को उत्तम साइतमा जमरा राखियो ।